steemit – @mmunited
ဒီတစ်ခါတော့ သေသေချာချာ ရှင်းပြမှ ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ အီးစတင်းက အပ်ဗုတ် ဘယ်လိုပေးသလဲ။ ကျွန်တော်က အပ်ဗုတ်ဘယ်လိုပေးသလဲ။ အပ်ဗုတ်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ပိုစ့်တင်ရင်ရော ဘယ်လိုအချိန်မှာ တင်သင့်သလဲ စတာတွေကို သေသေချာချာရှင်းပြဖို့လိုပြီထင်ပါတယ်။ ### အီးစတင်းက အပ်ဗုတ် ဘယ်လိုပေးသလဲ။ ### 1. ကျွန်တော် ဗုတ်ပေးတဲ့ပိုစ့်တွေကို အီးတင်းကလိုက်ပြီးတော့ ဗုတ်ပေးပါတယ်။ 2. ကျွန်တော်တင်မကပါဘူး။ အခြား ကူရေးရှင်းလုပ်တဲ့ သူတွေလဲ ရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဗုတ်မပေးပေမဲ့လဲ ဗုတ်ရနိုင်ပါတယ်။ 3. သူ ဗုတ် ပေးခဲ့တဲ့ အချိန် ၂၄ နာရီပြည့်မှ နောက်ထပ် ပိုစ့်တစ်ခုကို ဗုတ်ပေးပါတယ်။ 4. အီးစတင်းကို သုံးပြီးရေးထားဖို့လိုပါတယ်။ 5. အီးစတင်း ကို တက်တွဲထားဖို့လိုပါတယ်။ (ဒါကလဲ ရှာရလွယ်အောင်လို့ပါ။) …
ဒီအကြောင်းအရာကို @aggamun က ကျွန်တော့်ကို ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ @aggamun ကို credit ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာလဲ ရေးစရာတွေက ရှိနေတော့ ဒီပိုစ့်အကြောင်းကို ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်ဘူး။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ internet connectionu ကလဲ မကောင်းတော့ discord ကိုတောင် ဝင်လို့မရ ဖြစ်နေပါတယ်။ Vote ပေး comment ပေးလို့လဲ မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုက လူတိုင်းကို တစ်နေ့ကို vote တစ်ခု ပဲပေးထားပါတယ်။ အချို့တွေက တစ်ရက်ထဲ ကို ပိုစ့်တစ်ခု အရင်တင်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်က vote ပေးလိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ မှ esteem နဲ့ထပ်တင်တယ်။ အဲ့ ဒိအချိန်မှာ ကျွန်တော့် vote က ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်မရတော့ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေကို …
Curation tool for myanmar curators #1
ဒီပိုစ့်မှာကတော့ curation tool တစ်ခုအကြောင်းရေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ရွေးချယ်ပေးဖို့ တာဝန်ယူထားတာကတော့ esteem app ကိုသုံးပြီးရေးထားတဲ့၊ tag မှာ esteem ကိုထည့်ထားတဲ့၊ myanmar လိုရေးထားတဲ့ ပိုစ့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ myanmar အတော်များများကတော့ မြန်မာဆိုတဲ့ tag အောက်မှာရေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ esteem သုံးတဲ့သူတွေကတော့ esteem ဆိုတဲ့ tag ကို ထည့်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက myanmar tag ကို ထည့်ထားတဲ့သူတွေကလဲ အများကြီးပဲ။ အဲ့ဒိလိုပဲ esteem tag ကိုထည့်ထားတဲ့သူတွေကလဲ အများကြီးပဲ။ အဲ့ဒိတော့ ပိုစ့်တွေကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားထားတာကတော့ #esteem-myanmar ဆိုတဲ့ tag ကို သုံးဖို့ပါ။ အဲ့ဒိ tag တစ်ခုကို …
တချိန်တုန်းက ဆိုရင်တော့ အီးစတင်းကို မြန်မာလူမျိုးတွေ သုံးစွဲကြတာအတော့်ကိုများပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ အရမ်းကို နည်းသွားခဲ့ပါပြီ။ အီးစတင်းရဲ့ upvote က အရင်ကလောက် တန်ကြေးမရှိတော့တာရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ အီးစတင်းက မဲမပေးတော့တာရယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေကလဲ အီးစတင်းကို သုံးပြီး copy/paste တွေတင်တာများလာတယ်။ အကောင့်တုတွေ လုပ်ပြီး အီးစတင်းကို မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးချလာတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကြောင့် မြန်မာတွေကို နိုင်ငံခြားသားတွေက အထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အီးစတင်းဆီက မဲမှမရဘူးဆိုရင်တော့ အီးစတင်းနဲမရေးကြပါဘူး။ သူ့ကို ၁၀%ပေးရမှာစိုးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး မရင်းနှီးချင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ပါတီကို ဆိုတဲ့ အက်ပ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်လဲ အီးစတင်းကို သုံးတာနည်းသွားပါတယ်။ အဲ့ဒိ အက်ပ်က ကိုယ်သုံးရင်သုံးသလောက်ကို ပွိုင့်တွေရပါတယ်။ အဲ့ဒိပွိုင့်တွေနဲ့ မဲပြန်ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါဆို ဘာဖြစ်လို့ အီးစတင်းဘက်ကို …
Mono Sodium Glutamate(MSG)
မြန်မာလိုတော့ဟင်းချို့မှုန့်၊ဒါမှမဟုတ် အချိုမှုန့်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အချိုမှုန့်စားရင် အန္တရာယ်ရှိသလား။ သာမန်စားတဲ့ပမာဏကိုပဲစားရင် အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ FDA ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အချို့လူတွေမှာ အောက်ပါလက္ခဏာတွေတော့တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း မျက်နှာရဲလာခြင်း ချွေးထွက်ခြင်း မျက်နှာထူအမ်းလာခြင်း မျက်နှာနှင့်အခြားနေရာများ ရောင်ရမ်းနီရဲလာခြင်း နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်လာခြင်း ရင်ဘတ်နာခြင်း မောပန်းလွယ်ခြင်း အဲ့ဒိလိုဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် အချိုမှုန့်ကိုရှောင်လိုက်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ MSG ဆိုတာကတော့ Sodium နဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်နဲ့ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကလဲထုတ်လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒိအတွက် လိုအပ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်ထဲမှာတော့မပါပါဘူး။ သူ့ကို အနည်းငယ်စားရုံနဲ့ အန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူး။ အစားအစာကို အရသာတိုးအောင်ထည့်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပမှာထက်စာရင် အာရှမှာပိုအသုံးများပါတယ်။ US, UK စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ တစ်နေ့ကို 0.55-0.58 grams လောက်ပဲသုံးပါတယ်။ Japan, Korea စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ 1.2-1.7 grams လောက်ပဲသုံးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရော ဘယ် လောက်သုံးတယ်လို့ထင်ပါသလဲ။ 100 …
contest steem steemit
An initiative to solve RC problems: contests that delegate SP
I has seen2posts that writing about RC problems in featured posts of #payitforward curation contest. I thinkalot of redfish are suffering this problems. @simplymike,@welcomewagon, @markangeltrueman and @llfarms are giveaway SP in their contest. I will add links below: Redfish Rocket Contest 3: Win A Delegation And Stop Running Out Of RC Hurting …
steem steemit steemmonsters
Steem Monsters – Auction: Spineback wolf / Beta / Level4/ Common / Death
In this post I start using @steembay for aution. I would like to make aution for Spineback Wolf (gold). This card price in the market currently is 2.88$. It worth 3.38 steem in current steem price. I would like to start my bid with3steem. Take advantage of this auction to get …